जिवनशैली Archives - sandeshpost
Home > Archive by Category जिवनशैली
श्रीमानले कमाएको आम्दानी घरव्यवहारमा खर्चिएपनि मैले कमाएको आम्दानी बचत हुन्छ: गाडीवाली गंगा !!
December 12, 2018 admin17
प्रत्येक दिन बिहान ४ बजे घडीको ‘टिरिङ–टिरिङ’ आवाजले गंगालाई निद्राबाट ब्यूँझाउँछ। उनी हतारहतार उठ्छिन्, र नानीबाबुहरुलाई खाजा तयार गर्नतिर लाग्छिन्। ७ बजेभित्र बिहानको खाना तयार गरिसक्नुपर्छ उनले। सारा घरधन्दा बिहान ७ बज्न नपाउँदै सकेर उनी गाडीको चाबी लिएर बाहिर निस्कन्छिन्। अघिल्लो दिन बेलुकै तयार पारेर राखेका खुद्रा सामान बिक्रीका लागि गाडी लिएर कुश्माबजार निस्केकी उनी […]
December 12, 2018 admin29
मुम्बइ। बलिउडमा बेलाबेलामा दक्षिण भारतीइ फिल्मका हिरोइनहरु आउने गर्छन् । तापसी पन्नु, इलियाना डिक्रुज, असिन, भूमिका चावला, काजल अग्रवाल जस्ता हिरोइनहरु बलिउडमा आइसकेका छन् । यी हिरोइनहरु केही सफल रहे केही असफल भए । केही बलिउडबाट डेब्यू गरेका हिरोइन साउथमा गएर हिट भए । अहिले ६ दक्षिण भारतीय हिरोइन बलिउड भित्रिने तयारीमा छन् । आउनुहोस् […]
‘चक दे इण्डिया’की विद्या ४४ वर्षमा पनि देखिन्छिन् यति हट, हेर्नुहोस् १० फोटो
मुम्बइ। ११ वर्षअघि २००७ मा बनेको शाहरुख खानको फिल्म चक दे इण्डियामा भारतीय महिला हकी टिमकी कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्ने विद्या मालवडे सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् । सामाजिक संजालमा शेयर गरिएका हट र बोल्ड फोटोका कारण उनी आज पनि चर्चामा रहन्छिन् । विद्या अहिले अमेरिकामा विदा मनाउँदैछिन् । विदेश ट्रिपका क्रममा अहिले विद्याले सामाजिक […]
December 12, 2018 admin28
मुम्बइ। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अहिले राजनीतिमा सक्रिय छन् । पहिले भारतीइ जनता पार्टीमा आबद्ध सिद्धू अहिले भने कांग्रेसका तर्फबाट पंजाबमा क्याबिनेट मन्त्री छन् । सिद्धू यसका अलावा टेलिभिजन शोमा पनि सक्रिय छन् । कपिल शर्माको शोका निमित अतिथि सिद्धू यसअघि दि ग्रेट इण्डियन लाफ्टर च्यालेन्जमा पनि जज थिए । सिद्धूका २ सन्तान छन् […]
साम्राज्ञी र पुष्प खड्काको जोडी चिटिक्क (तस्बिर सहित)
काठमाडौं,मंसिर २६ मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको बिच चलचित्र ‘मारूनी’ निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। निर्देशकदेखि कलाकारहरुलाई र्‍याम्पमा उतार्दै ‘मारूनी’ घोषणा गरिएको हो । चलचित्रमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह र डेब्यू अभिनेत्री रेविका गुरूङको साथमा अभिनेता पुष्प खड्का मुख्य भूमिकामा देखिनेछन्।चलचित्र लाई नवल नेपालले निर्देशन गर्दैछन्।माघ दोस्रो साताबाट छायांकन आरम्भ हुने फिल्मले दुई सुन्दरी युवतीको […]
शाहरुखकी छोरी सुहानाले टाइट ड्रेसमा शेयर गरिन् हट फोटो, बेकाबु भए युवकहरु
December 12, 2018 admin18
मुम्बइ। बलिउडका किंग खान शाहरुख खानकी छोरी सुहाना खान पछिल्लो समय फोटोका कारण निकै चर्चामा छिन् । हालै सुहाना निकै टाइट ड्रेस लगाएर सडकमा निस्किइन् । फोटोमा सुहाना निकै हट देखिएकी थिइन् । सुहाना यसअघि पनि ड्रेसका कारण कैयौं पटक चर्चामा आइसकेकी छिन् । यसपटक पनि सुहानाले यस्तो ड्रेस लगाइन् कि सब दंग परे । […]
यी फोटोका कारण लज्जित भइसकेकी छिन् हंसिका मोटवानी, देखिएको थियो गोप्य अंग
December 12, 2018 admin48
मुम्बइ। बलिउडमा बालकलाकारको रुपमा भित्रिएकी हंसिका मोटवानी अहिले दक्षिण भारतीइ फिल्ममा हिरोइनको रुपमा जमिसकेकी छिन् । उनका बालसुलभ व्यवहार पहिलेदेखि नै दर्शकले मन पराएका थिए । पछिल्लो समय हंसिका आफ्ना केही फोटोका कारण लज्जित हुनुपरेको थियो । यी फोटोका कारण केही समय निकै हंगामा मच्चिएको थियो । हंसिकाले २००१ मा ‘जिस देश में निकला होगा […]
सिंगापुरमा पानीमा आगो लगाइन् संजय दत्तकी पत्नी मान्यताले, हेर्नुहोस् ६ हट तस्वीरहरु
December 12, 2018 admin67
सिंगापुर। अहिले धेरै बलिउड सेलिब्रेटीहरु सुटिङबाट ब्रेक लिएर विदा मनाउन गएका छन् । रणवीर कपुरपछि अहिले संजय दत्त पनि सिंगापुरमा परिवारसँग रमाइलो समय बिताइरहेका देखिए । हालै संजय दत्तकी पत्नी मान्यताले सामाजिक संजालमा आफूहरुका केही फाटो शेयर गरेकी छिन् । फोटोमा मान्यता निकै हट देखिएकी छिन् । एक फोटोमा मान्यता आफ्ना दुई सन्तानसँग स्विमिङ पुलमा […]
मैले विवाह नगर्न खोजेकी पनि होइन, सम्भवत: मैले चाहेको मान्छे, मेरो जीवनमा आउने मान्छेको साइत नजुरेको होला ।
December 11, 2018 admin42
बलिउडका यि चर्चित कलाकार ! जसले नेपाली फिल्ममा काम गरे
December 11, 2018 admin23
सन्नि लियोन : बलिउडकी चर्चित हट अभिनेत्री सन्नि लियोन हालसालै नेपाली फिल्म ‘पासवर्ड’को एक आइटम गीतमा काम गरेकी छिन् । उक्त गीतको छायाँकनमा मात्रै निर्माण टिमले पाँच करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त फिल्ममा समावेश हुने गीत ‘सन्नि हो नाम मेरो‘’ बोलको गीत रहेको छ । उक्त गितमा सन्नि लियोनले आइटम डान्स गरेकी छिन् […]
श्रीमान बिदेश भएकी महिलालाई बलात्कार गर्न खोज्नेलाई जुत्ताको माला र २… (116)
सैफअलि खान की छोरीले नेपाली बोल्दै नेपाली दर्शकलाई यस्तो भनेपछि… (73)
यौन जिज्ञाशा: महिलालाई असाध्यै मनपर्ने यौन आसन कुन कुन हुन् ? (37)
भगवानका पाला देखिनै यौन सम्पर्क गर्ने सयौ तरिका भए पनि महिलाहरूलाई मन… (20)